दसैं मनाउन भारतबाट घर फर्किन लागेका तीन नेपाली बीच बाटोमै लु’टिए! – Life Nepali
दसैं मनाउन भारतबाट घर फर्किन लागेका तीन नेपाली बीच बाटोमै लु’टिए!
भैरहवा– दसैं पर्व मनाउन घर फर्किन लागेका तीन नेपालीहरु भारतमा लु’टिएका छन्। भारतको विभिन्न ठाँउमा रोजगारको सिलसिलामा काम गरी घर फर्किदा तीनै जना बीच बाटोमै लुटिएको हुन्। भारतको हैदरबादबाट स्वदेश छोरासहित फर्किरहेकी तनहु मौवाकी कोपिला श्रेष्ठ विहीबार लुटिइएकी छन्। हैदराबादबाट ट्रेनमा नगदसहितको व्याग लिएर चडेकी श्रेष्ठ टे«नमै के कसरी निदाईन पत्तो पाइनन्। गोरखपुर आए ओर्लने बेलामा २ लाख भारु रहेको झोला नपाएपछि पछि आफु लुटिएको थाहा पाइन प्रहरीले उदृत गर्दै नागरिक न्यूजलाई जानकारी दिए।
द्वय विश्वकर्मा र पाण्डेको साथबाट क्रमश नगद रु ३५ हजार र ३० हजार भारु लुटिएको प्रहरी निरिक्षक बेलबासेले जानकारी दिए। उनीहरुले अरु रकम दिल्लीबाट नै रेमिटयान्स गरेकोले ठूलो दुर्घटनाबाट जोगिएको प्रहरीले जनाए। अहिले चाडबाडका क्रममा नेपालीहरु घर आउने बढी भएकोले भिडभाडमा चिनजानबाटै लुटपाट भएको हुन सक्छ। पहिलाको अवस्था भन्दा धेरै सुधार भएको छ। ‘यसको लाीग हामीले भारतीय प्रहरीसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेका छौं’ प्रहरी निरीक्षक बेलबासेले बताए। (फाइल तस्बिर )
Previous जापान जान चाहने इच्छुक व्यक्तिले अनलाइनमार्फत आवेदन दिन पाउने
Next कमला घिमिरे सांगीतिक कार्यक्रमको लागि अष्ट्रेलिया जाँदै !